အရောင်းသမားတွေ မကြားချင်ဆုံး စကား (၈) ခွန်း - Sales Training Programs by Charisma
အရောင်းသမားတွေ မကြားချင်ဆုံး စကား (၈) ခွန်း
ဒီနေရာကို ဖတ်ဖို့ရောက်လာပြီဆိုကတည်းက အရောင်းသမားတွေပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Sales အလုပ်ဟာ ဘယ်တော့မှ မပျင်းရတဲ့ အလုပ်တွေထဲ တစ်ခုအပါအဝင်။ ကိုယ်လုပ်ရင် လုပ်သလောက်၊ ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သလို အမြဲတမ်းလိုလို စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတက်တယ်။
ဒါပေမယ့် အရောင်းသမားတွေမှာလည်း ခက်ခဲတဲ့ကာလနဲ့ အတွေ့အကြုံ့တွေကို ကျော်ဖြတ်ရလေ့ရှိပါတယ်။ လုပ်သက်လေး ကြာလာပြီ၊ လူပေါင်းစုံနဲ့ စတင်ဆက်ဆံရလာပြီဆိုတာနဲ့ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဆိုသလို ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်အလုပ်အရ ဖုန်းခေါ်မိတဲ့အခါ တစ်ဖက်က ဖောက်သည်လောင်းက (တစ်ခုခုကြောင့်) စိတ်မကြည်တာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မဆက်ဆံခံရတဲ့အခါတွေမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်တက်ကြတာ သဘာဝ။ ဒါဟာလည်း ကိုယ့် အလုပ်ထဲမှာ ကြုံ့တွေ့ရမယ့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမို့ အထူးအထွေ လိုက်မခံစားသင့်ဘူး။ သို့သော်ငြား အရောင်းသမားလိုလိုရဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်ခွင်မှာ ဖောက်သည်ကသော်လည်းကောင်း၊ ဖောက်သည်ဖြစ်လာမယ့် ဖောက်သည်လောင်းတွေကလည်းကောင်း၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေက ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာ မကြားချင်ဆုံး စကား (၅) ခွန်းတိတိရှိတယ်ဆိုတာ သိကြလား?
ဒီစကားဟာ အရောင်းသမားလိုလို ဖန်တရာတေနေအောင် ကြားရလွန်းလို့ ကြားလိုက်ရတိုင်းအခါတိုင်းမှာ စိတ်ထဲမှာ မသိမသာလေး ရယ်ချင်သွားမယ်ဆိုတာ လောင်းကြေးထပ်ရဲပါတယ်။ ဘာလို့လဲ? ဘယ်သူမှ ဘယ်တော့မှ တကယ် ပြန်မခေါ်ကြပါဘူး။ ဖောက်သည်တွေဖက်ကကြည့်ရင် မျက်နှာမပျက်ချင်လို့ အလိမ္မာသုံးပြီး ပြောလိုက်ပေမယ့် အရောင်းသမားတွေအဖို့မှာတော့ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သွားပြီး တစ်ဖက်ကပြန်ခေါ်သောငြား ကိုယ့်ဖက်က follow up call လေးတွေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ကြတော့ဘူး။ ကြုံကြိုက်လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ဖောက်သည်လောင်းတွေဖက်ကလည်း ဝယ်နိုင်ခြေမရှိရင် မဝယ်ဘူးဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပေးချင်းက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် အချိန်နဲ့ ခွန်အားစိုက်ထုတ်မှုတွေ သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
ဖောက်သည်တိုင်းလိုလိုက လျှော့ဈေးပေါ့ဈေးနဲ့ လိုချင်ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ ဒါဟာလည်း လူ့သဘာဝမို့လို့အပြစ်လို့မဆိုသာဘူး။ အရောင်းသမားတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း တခြားတစ်ဖက်မှာ ဖောက်သည်ဖြစ်နေတက်လို့ ကိုယ်ချင်းစာမိမယ်ထင်တယ်။ ဈေးနှုန်းသည် တချို့ဖောက်သည်တွေအတွက် စကားပြောပေမယ့် တချို့တွေအတွက်တော့ ပြဿနာ မရှိလှပါဘူး။ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဖောက်သည်တိုင်းလိုလိုက ဈေးချခိုင်းတက်တော့ sales process တစ်ခုမှာ ဒါသည် part of the game ပါ။ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတာက ဖောက်သည်ရဲ့ target budget ကို မေးချင်းအားဖြင့် အရောင်းတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် ပိုမိုခရီးရောက်စေပါလိမ့်မယ်။
Sales အလုပ်က ဘာမှမခက်ပါဘူးကွာ။
အရောင်းသမားတော်တော်များများတော့ တစ်ကွေ့မဟုတ်တစ်ကွေ့တော့ (အရောင်း)မဟုတ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်းကသော်၎င်း၊ ကိုယ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ မိသားစုဝင် တချို့က “sales အလုပ်က ဘာခက်လို့လဲ၊ လူတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကွာ” လို့နောက်သလိုပြောင်သလိုပြောတာကြားရတိုင်း အစပိုင်းမှာတော့ အောင့်သက်သက် ဖြစ်ရပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ မချိပြုံးပဲ ပြုံးတော့တယ်။ cold calling တွေ လုပ်ရတဲ့အခါ၊ ဝယ်မယ်ပြောပြီး နောက်ဆုံးမိနစ်ကျမှ အရောင်းပျက်သွားလို့ target မထိတော့တာတွေ၊ ဖိအားဒဏ်တွေ၊ customer rights ကို abuse (အလွှဲသုံးစားလုပ်) ပြီး အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေ၊ အရောင်းတွေမဖြစ်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျလာတွေကို မြင်ယောင်မိတိုင်း ပြောတဲ့သူတွေသည် တစ်ခါမှ sales အလုပ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် မလုပ်ဖူးဆိုတာ သိသာစေလို့ ဒီလိုပြောခံရတိုင်း အရောင်းသမားတွေ မနှစ်မြို့တက်ကြပါဘူး။
အရောင်းသမားတွေက မရိုးသားဘူး၊ ကလိန်ကကျစ်ကျတယ်။
ဒီစကားဟာ ပြင်းထန်သလို ကြားလိုက်ရတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံမှတပါး ဘာမှမတက်နိုင်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက ခုချိန်ထိ မှန်နေဆဲမို့ပါ။ တချို့ စိတ်ဓါတ်မကောင်း ကျင့်ဝတ်မရှိတဲ့ အရောင်းသမားတွေကြောင့် ဖောက်သည်တွေဟာ အရောင်းသမားဆိုရင် သတိဆွဲပြီးဆက်ဆံတက်ကြသလို အရောင်းသမားဆိုတာနဲ့ အကုန်လုံးအတူတူချည်းဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်ကြတာများပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင် - ကိုယ်ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်း(သို့)ဝန်ဆောင်မှုကို ဝယ်လိုက်ရင် ကိုယ်ကတော့ commission ရပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ဖောက်သည်အတွက် ဘာမှအသုံးမဝင်၊ သူ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လွယ်ကူစေဖို့ အကူအညီ အထောက်အပံ မဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေနဲ့ မရောင်းခင်က ရွှန်းရွှန်းဝေပြီး ရောင်းပြီးမှ အဖက်မလုပ်ပဲ ပစ်ထားတာမျိုးတွေပါ။ ဖောက်သည်ကို တကယ်ကူညီချင်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကောင်းကောင်း၊ ကျင့်ဝတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အရောင်းသမားတွေ နစ်နာပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်း ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိပေမယ့် ဖောက်သည်အတွက် အကျိုးမရှိနိုင်ရင် မရောင်းပဲနေနိုင်ပြီး အရောင်းသမားသည် ရောင်းဖို့သတ်သတ်ထက် ဖောက်သည်ကိုကူညီဖို့ဆိုတာ အမြဲနှလုံးသွင်းထားဖို့လိုသလို ဖောက်သည်တွေဖက်ကလည်း အရောင်းသမားတိုင်း ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပေးချင်ပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်မကောင်းတဲ့သူဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်ဗျာ။
AI တွေ ဖွံဖြိုးလာတာနဲ့ အရောင်းသမားတွေ ဘုံပျောက်ပြီ။
ဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အရောင်းသမားတွေအတွက် စိမ်းနေကောင်းစိမ်းနေနိုင်ပေမယ့် ဒီဖက်ခေတ်နောက်ပိုင်း အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဆွေးနွေးလာကြတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပြီ။ နည်းပညာကို ဘယ်သူမှ မတားနိုင်ပေမယ့် AI က အရောင်းမှ မဟုတ်ဘူး၊ တခြား professions တွေကိုပါ စိန်ခေါ်နေတာပါ။ (စာရေးသူ ကျွန်တော့အမြင်အရပြောရရင်) ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ အရောင်းသမားတွေက လေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေအရ နောက်ဆုံးတန်းမှာ လုံခြုံလို့နေပါတယ်။
(“AI တွေက ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကို ခိုးယူသွားနိုင်သလား” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သပ်သပ်တင်ပေးသွားပါမယ်)